Ronald Keoman Oo Isbedel Ku Sameeyey Qaab Ciyaaredka Barcelona Kulankii Sevilla.
Home Horyaalka Spain Ronald Keoman oo isbedel ku sameeyey Qaab ciyaaredka barcelona kulankii Sevilla.
Barcelona ayaa si la yaab leh ugu qancisay inay 2-0 kaga badiyaan Sevilla kulankii lagu ciyaaray Estadio Ramon Sanchez Pizjuan sabtidii Kooxda martida aheyd ee ciyaarta ayaa inta badan hoos u dhacday taatikada Ronald Koeman, oo ay ku dileen ciyaartoydiisa.
Ninka reer Holland ayaa u soo dejiyey nidaam ah seddex daafac dhexe, iyo shan dhexe iyo labo weerar waana 3-5-2 ama 5-3-2
Barcelona ayaa kaliya isticmaashay nidaamkan labo jeer ka hor xilli ciyaareedkan, oo ay kujirto guushii 3-0 ee ay ka gaartay Real Valladolid Waxaa jira dhowr faa’iidooyin iyo faa’iido-darro oo la socota qaabkan.
Markii Barcelona ay ka maqneyd Sevilla, Jordi Alba ayaa inta badan garabka bidix ka ciyaara halka Oscar Mingueza uu yahay daafaca dhexe.
Dhanka kale, Sergino Dest wuxuu gudaha u galay sidii koox kale oo khadka dhexe ah oo ay weheliyaan Frenkie de Jong ama Pedri, iyagoo abuuraya nidaam adag oo 4-4-2 ah.
Isbeddellada ayaa khalkhal geliyay kooxda Julen Lopetegui, kuwaas oo awoodi waayey inay helaan dariiqii ka horreeyay xannibaadda adag.
Busquets ka raaxo badan
Qaab dhismeedka Koeman ee 3-5-2, Sergio Busquets wuu sii yaraanayaa wuuna ku lug yeeshaa marar badan. Tani waa sababta oo ah inuusan u baahnayn farqiga u dhexeeya asxaabtiisa kooxda.
Khadka dhexe ee gabowga, nooca badbaadada ee seddexda dambe ay bixiso waxay saameyn weyn ku leedahay waxqabadkooda.
Weerar dheeraad ah oo la xoreeyay
Iyada oo shaqooyinkooda difaaca ay hoos u dhacday iyada oo ay jiraan daafacyo dheeri ah oo garoonka dhexdiisa ah, sida Lionel Messi iyo Ousmane Dembele ayaa xor u ah inay horay u socdaan.
Labada weeraryahanba waxay tan ku sameeyeen saameyn weyn Sevilla, iyagoo dhaliyay goolal horseeday guusha. Isbeddelka ku yimid qaab dhismeedka ayaa caan ku ahaa soo bandhigida Dembele gaar ahaan.
Nidaamku wuxuu sidoo kale ka faa’iidaystay Dest, oo difaacasho Fiican soo bandhigay kulankii Champions League.
Griezmann aan faraxsaneyn
Xeeladaha Koeman wax fursad ah ugama aysan helin Antoine Griezmann bilowgii 11 ama kuwii ka soo kacay kursiga keydka ee Nervion.
Ninka reer France ayaa bedel ku soo galay 90ka daqiiqo ee buuxa iyadoo Koeman uu doorbiday inuu si dhaqso leh u wajaho sida Dembele oo kale.
Previous articleLiverpool oo ku fikireysa in Stevan Gerard ka dhigto macalinkeeda xiga.
Next articleKa hor kulanka adag ee chelsea iyo man united Thomas Thuchel oo ka hadlay Werner.